Ifulethi Lasegaraji Elizimele Elithandekayo - I-Airbnb
Ifulethi Lasegaraji Elizimele Elithandekayo
Houma, Louisiana, i-United States
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Monique
U-Monique unokuphawula okungu-207 kwezinye izindawo.
Ifulethi elihle, elihlanzekile nelithandekayo egalaji langasese eduze nedolobha lase-Houma. Amamayela angu-4 (imizuzu engu-12 ngemoto) ukuya e-Chabert Medical Center. Le ndawo inakho konke ozokudinga ukuze uhlale isikhathi eside. Ideski nesihlalo sasehhovisi (hhayi esithombeni) sisegumbini lokulala. Zonke izikweletu ezikhokhiwe kuhlanganise ne-inthanethi ye-hi-speed. Kukhona umshini wokuwasha nokomisa egalaji langempela ngaphansi kwakho, owamukelekile ukuwusebenzisa ngesaziso esandulele. Ukupaka kusemgwaqweni. Ukuhlala okukodwa kuphela.
Sicela uqaphele ukuthi lena yindlu yokuhlala eyodwa. Phumula kusofa omncane ogoqwayo embhedeni wokulala, indawo yokuphumula esihlalweni sesikhumba nensimbi, uphumule emphemeni ngenkathi ubuka ukushona kwelanga.. Leli fulethi elincane egalaji lilungele isimo sokuphumula esiphezulu. Iphezu kwegalaji futhi yayikade iyindlu esophahleni- emvelweni yayo esemaphandleni futhi ihloselwe ukuba ngaleyo ndlela. Izindonga nezindawo zaphansi zonke zipeyintiwe- ngenhloso :) Ubuhle bayo besimanje nobumbalwa bufanelekile esivakashini esinomqondo ovulekile ohlangothini lwezinto kunohlangothi lwendabuko lwezinto.. Leli fulethi liphezu kwegalaji elixhumene nendlu yami. Umama wami uhlala endlini enkulu futhi uhlale etholakala ukusiza uma kudingeka. Uzobe wabelana ngomshini wokuwasha nokomisa indlu eyinhloko. I-heater yamanzi yendawo yaphansi yefulethi iyisistimu efunwayo enikezelwe efulethini legalaji kuphela. Kungase kudingeke ngifinyelele emnyango ophezu kwendlu okuleli fulethi ngezikhathi ezithile, kodwa ngizohlala ngicela imvume kuqala. Ifulethi linomshini omusha wokushisisa nokupholisa umoya.
I-HDTV engu-27" ene- I-Netflix, I-Roku
Indawo enhle eseduze nedolobha elinomlando we-Houma. Ifulethi lingamakhilomitha angu-4 (imizuzu engu-12 ngemoto) ukuya e-Chabert Medical Center.
Ngihlezi ngitholakala uma kukhona odinga noma yini- ngihlala endlini kodwa nginikeza zonke izivakashi indawo yazo ngaphandle uma zibizwa ngokuthi:)
Hlola ezinye izinketho ezise- Houma namaphethelo